Degmooyinka Wisconsin waxay leeyihiin awood ballaaran si ay u kantaroolaan isticmaalka dhulka iyo ilaalinta khayraadka dabiiciga ah, laakiin qaar badan oo ka mid ah hay'adaha gobolka iyo federaalka ee ku saabsan go'aamada horumarinta qoyaanka. Iyadoo aysan jirin hawlgal firfircoon oo degaanka ah, go'aamada saameynaya dhulalka qoyaanka waxay ku xirnaan karaan hadafyada iyo mudnaanta beesha.
Si loo wanaajiyo tixgelinta dhulalka qoyaanka ah ee ku saabsan go'aan qaadashada isticmaalka dhulka ee dhulka, Ururka Wetlands Wetlands (WWA) waxay soo saartey siminaaro isdabajoog ah oo ku salaysan goobaha qorshaynta iyo is-daba-galinta shaqaalaha. Qorsheynta iyo wacyigelinta shaqaaluhu waxay bartaan sida loo tixgeliyo qoyaanka iyo baaxada biyaha ee soo jeedinta horumarinta iyo ilaalinta hawlaha qiimaha leh ee dhulalka qoyan ee beelahooda iyo guud ahaan Wabiga Mississippi.
Iyadoo loo marayo sagaal aqoon-isweydaarsiyo, WWA waxa ay tababar ku siisay 160 qof oo ka kooban 50 degmo oo ay weheliyaan shaqaale ka socda hay'ado kale sida magaalooyinka, qabiilooyinka, guddiyada qorshaynta gobolka, hay'adaha dhulka, iyo kooxaha biyaha. Ka qaybgalayaashu waxay si weyn u amaaneen siminaaradaan waxayna weydiisteen fursado tababar dheeraad ah oo la xidhiidha biyaha wetland.
Natiijooyinka waxay muujinayaan in aqoon-isweydaarsiyadu ay sare u qaadaan kartida ka qaybgalayaasha:
aqoonsadaan qoyaanka (boqolkiiba 100 jawaab bixiyayaasha)
ku daraya dhulalka qoyan ee dukumintiyada qorshaynta (81%)
cusbooneysiiya qawaaniinta si looga dhigo mid ka fiican ilaalinta qoyaanka (67%)
Tababarradaas ka baxsan, qorshaynta iyo wacyigelinta shaqaaluhu waxay leeyihiin helitaanka ugu yar ee tababarka qoyaanka. McKnight wuxuu la shaqeynayaa Ururka Wetlands Association si uu u gudbiyo farriinta ah sababta ay qoyaanka u nugul yihiin bulshooyinka Wisconsin. Macluumaadkan la'aanteed, beelaheena waa kuwo aan si fiican u qalabaysan si ay u ilaaliyaan oo ay u daryeelaan goobahooda qoyan, iyo ugu dambaynta, caafimaadka Wabiga Mississippi Basin.
Ururka Wetlands Association waxaa la aasaasay 1969-kii si loo ilaaliyo kheyraadka qoyaanka ee gobolka iyada oo loo marayo waxbarasho, tababar, udood, iyo cilmi baaris ku saabsan arrimaha muhiimka ah ee saameeya qoyaanka. In ka badan 1,450 xubnood ayaa ka mid ah saynisyahanno qoyan iyo barayaasha, ilaaliyeyaasha, ugaarsiga, muwaadiniinta danaynaya, iyo ururada maxaliga ah iyo kuwa gobolka. WWA waxay ka heshaa taageero guud oo ay ka hesho barnaamijka McKnight ee Mississippi River si ay uga shaqeeyaan ilaalinta meelaha qoyan ee Mississippi iyo xudduudaha.